Sida loo dhaqo gaarigaaga: tilmaamaha ugu fiican ee gaarigaaga uga dhigaya mid aan fiicnayn | Ragga Stylish
Sida loo dhaqo gaariga
Jarmal Portillo | | nololeedka
Si loo helo dayactirka wanaagsan ee baabuurkeenna waa inaan ogaannaa sida loo dhaqo gaariga. Waxaa jira dad layaaban hadii ay fiicantahay in gacmaha lagu dhaqo ama gaariga lagu maydho goobta shidaalka Sidaan ognahay waxaa muhiim ah in badanaa la maydho gaariga si wasakhdu uusoo badato. Haddii aan u oggolaanno in wasakhdu isku urursato muddo ka dib, waxay saameyn ku yeelan kartaa aagagga miridhku ku yaal qaybta jidhka iyo xitaa meelaha jiifku ka kooban yahay. Markuu rinjiga bilaabo inuu kaco, waxaa u sabab ah daxalka iyo wasakhda.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u barato sida loo dhaqo gaarigaaga.
1 Gaariga ku dhaq maydhashada gaariga
2 Talooyin ku saabsan barashada sida loogu maydho gaadhigaaga meel maydh ah
3 Saldhig gacmo dhaqid
4 Tilmaamaha barashada sida loo dhaqo gaarigaaga
Gaariga ku dhaq maydhashada gaariga
Waan ognahay in gaari wasakh leh uu sidoo kale si xoogan u saameeyo waxqabadka nalalka hore, dareemayaasha iyo kaamirooyinka gawaarida lagu qalabeeyay. Si kasta oo ay tahay habka aad u nadiifiso gaariga, illaa iyo inta uu ku dhammaanayo natiijo wanaagsan. Adeegsiga maydhashada baabuurta iyo tan bini'aadamka oo la isticmaalo waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo waxyeellooyin. Waxaan falanqeyneynaa maxay yihiin faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka ku dhaqa gaarigaaga qashinka lagu dhaqo.
Markii aan tagno meelaha lagu dhaqo gawaarida waxaan arki karnaa in timaha rollers-ku aysan ku jirin xaalado ku habboon isticmaalka degdegga ah. Burushkan oo xaaladoodu liidato waxay u horseedi karaan xoogaa waxyeelo jidhka gaadhigayaga. Goobaha dharka lagu dhaqdo keligaa ayaa u baahan waqti iyo dadaal dheeri ah. Sidaa darteed, waxaan falanqeyneynaa habka ugu wanaagsan ee lagu baran karo sida loo dhaqo gaariga isagoo leh faa'iidooyinka ugu fiican.
Tallaabada ugu habboon ee lagu dhaqo gaariga gaarigiisa Waxaa loogu talagalay qofka safar gala ama ka yimaada. Burushka qaar ayaa laga yaabaa inay ku jiraan xaalad aan ku habboonayn oo ay xoqin karaan rinjiga. Tani waxay keentaa in qashin caag ah uu soo baxo oo umuuqda mid xoqan. Ku dhowaad dhammaan qaybaha burushku waxay ka samaysan yihiin polyetylen. Waa shey aad ugu eg kuwa laga helo dharka. Markii la iskudhafo waraabinta saxda ah badiyaa khatar guud ma leh rinjiga gaariga. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira cabashooyin badan oo ka yimaada xoqitaanno badanaa ka yimaada sababo kale. Tusaale ahaan, waxaa jira miro ciid ah ama wasakh aad u adag ama xitaa wasakh ka timaada gaarigii hore. Qaybahan wasakhda badan si fiican looma kala bixin oo waxay ku sii jiraan burushyada.
Burushyada oo xaaladoodu liidato awgeed, waxaan ka helnay xag-xagashada dahsoon shaqada jirka. Sidaa darteed, talo bixin si aad awood ugu yeelatid gaariga si sax ah gaariga dhaqiddiisa waa maalin roob leh. Maalmahan waxaynu ognahay in jidhku noqonayo mid jilicsan qaybna wasakhda ka soo bixi doonta. Talo kale ka hor intaadan bilaabin inaad ku maydho gaariga gaadhiga dhexdiisa waa inaad horay u siisaa. Qaabkan, waxaad ka saareysaa wasakhda dusha sare iyo firida baqdinta leh ee ciida ee xoqi kara rinjiga.
Talooyin ku saabsan barashada sida loogu maydho gaadhigaaga meel maydh ah
Aan aragno tilmaamaha ugu muhiimsan ee ah inaad karti u leedahay barashada sida gaariga loogu dhaqo gaariga dhaqiddiisa:
Adeegso barnaamij sax ah: Markaan dooran doonno barnaamijka gaariga lagu dhaqo waa inaan dooranaa midka saxda ah. Waxay ku xirnaan doontaa miisaaniyaddayada cimilada xilligan. Xilliga jiilaalka, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho dhaqo xumbo firfircoon, wax kulul iyo maydhashada hoose. Qiimaha maydhayaashani waa qiyaastii 5 euro. Kuwa ugu xoogan waxay ku kici karaan ilaa 15 euro.
Gaadhiga geli meesha saxda ah: waa inaan maanka ku haynaa inay tahay inaan xirno daaqadaha iyo qorrax dhaca, haddii ay jiraan. Waa inaan ka hawlgalin masaxayaasha muraayadaha hore iyo dareeraha roobka. Waa inaanu isticmaalnaa qufulka dhexe maadaama aan ka hortageyno in daboolka shidaalka uu kalabadhka ku furmo maydhashada. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad isku laabto muraayadaha oo laga saaro anteenada raadiyaha, hadii ay suurta gal tahay. Tilmaamayaasha baabuur maydhis kasta ayaa lagu qeexay boodhadh.
Tallaabooyinka ka dib dhaqitaanka gaariga: Waa in isla markiiba lagu qalajiyaa maro microfiber si looga fogaado raadadka biyaha ee aan loo baahnayn. Sidoo kale waxaa lagugula talinayaa inaad dhaafto meelaha ay adagtahay inaad gacanta ku gasho sida shaabadaha albaabada, daboolka iyo jirridda. Waxaa lagugula talinayaa inaad ku mayrto daaqadaha oo dhan nadiifiyaha dhalada.
Dhaqida gawaarida wareega ama guurguura: Iyadoo aan loo eegin habka aad ugu dhaqdo gaariga, natiijada inta badan waa isku mid. Labada xaaladoodba, alaabooyin nadaafadeed oo isku mid ah ayaa loo isticmaalaa iyo walxo isku mid ah oo burushyada laga sameeyo.
Cabashooyinka: Haddii waxyeello dhacdo, waa inaad isla markiiba wacdaa qof mas'uul ka ah si aad ugu qorto oo aad u saxiixdo.
Saldhig gacmo dhaqid
Tani waa mid kale oo ka mid ah talooyinka aan ku baranayno sida loo dhaqo gaariga. Waa beddel shaqsi ah. Dhexdeeda, mid walba gaarigiisa ayuu ku maydhaa keligiis isagoo qaadanaya waqtiga loo baahan yahay. Gawaarida leh sanadaha qaarkood waxaa si weyn loogu talinayaa inay isticmaalaan nadiifinta noocan ah. Rinjiga ayaa ka dhib yar dhaqida gaariga. Badanaa waxay leedahay nidaamyo waraab oo kala duwan iyo maacuunta nadiifinta. Xaalado badan waad isticmaali kartaa alaabadaada haddii aad doorbideyso. Halkan waxaa si weyn lagugula talinayaa inaad si fiican u dhaqdo ka hor intaadan saabuun marin.
Aan aragno maxay yihiin talaabooyinka la raacayo:
Dhaqida gaariga aasaasiga ah: Biyaha la cadaadiyo ayaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro wasakhda dusha sare.
Ku dhaq maydhka baabuurta saabuun: waxay ka kooban tahay ku-xoqid iyo xoqid burushka.
Biyo raaci gaariga: biyo badan ayaa loo isticmaalaa in laga saaro dhamaan saabuunta.
Qalajinta gaariga: Waxaa loo adeegsadaa in laga fogaado inaad yeelato calaamado waxaana sida ugu fiican gacanta lagu sameeyaa.
Tilmaamaha barashada sida loo dhaqo gaarigaaga
Waxaan kaala hadli doonaa qaar ka mid ah tilmaamaha si aad uga tagto gaarigaaga xaalad qumman. Bilaha soo socda ee maydhashada ka dib, waxaad safarro badan la geli kartaa gaadhigaaga. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagugula talinayaa inaad sameyso nadiifin qoto dheer maadaama ay macquul tahay in saameynta jiilaalka ay ku reebi karto calaamado qoto dheer gaariga. Aan aragno tilmaamaha ugu muhiimsan:
Ka tag iyada oo kaamil ah banaanka
Nadiifinta gudaha gaariga
Si fiican u maydh qarfaha iyo taayirada oo hubi cadaadiskooda.
Iska ilaali daaqadaha si aad uga fogaato jajabka
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan sida saxda ah ee loogu maydho gaarigaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Sida loo dhaqo gaariga
Sida looga baaro caafimaadkaaga heerkulbeegyadan gallium-ka